लक्ष्मीप्रसाद पौडेल Archives | साहित्यपोस्ट
दीपक लोहनी	 ४ माघ २०७८ १८:०१ 0
१. काल विभाजनको लघुकथा - बुद्धि लक्ष्मीप्रसाद पौडेल ‘यसरी बोटै रित्तो हुनेगरी फूल नटिप्नु भएको भए हुन्थ्यो ! कस्तो रित्तो देखियो फूलबारी ।’ बिहान मोर्निङ वाकको बहानामा फूल टिपेर हैरान पारेका थिए । आज ढुकेरै फेला पारिन् रमाले ।…
लक्ष्मीप्रसाद पौडेल	 ४ माघ २०७८ १३:३५ 0
"मलाई पत्नीको गतिविधि फिटिक्कै चित्त बुझेन । गाउँघर समाज हँसाएर रमिता देखाउनुभन्दा घर छोड्नु उत्तम ठानेँ ।" उसले प्रहरीलाई आफ्नो नाम ठेगाना दुरुस्तझैँ बतायो । शारीरिक हुलिया र मानसिक अवस्था हेर्दा उसको सबै भनाइ जस्ताको तस्तै सही…
लघुकथा- लाखको न्याय
१५ भाद्र २०७८ ११:०१ 0
बुढीआमा टोलाएर ढुङ्गामाथि बसेकी थिइन् । अस्तिको घटना हो, वा होइन उनको मष्तिष्कले अझै पनि पत्याउन सकेको थिएन । उसले सबै छोडेर परिवारको भरोसा, गाँस, वास, कपास आफूसँगै लिएर गएको थियो । ऊ एक्लैले धानेको संसार रित्तिएको थियो । बज्यै बसेको…
लघुकथा- चरित्रको चित्र
१९ श्रावण २०७८ ११:०१ 0
रमेश चित्र उतार्नमा सिपालु थियो । चित्रकलाप्रति सानैदेखिको उसको सोख बिस्तारै व्यावसायिक जस्तो भइसकेको थियो । उसको चित्रकारिता मन पराएर धेरै जनाले उद्वारा निर्मित चित्रहरू किनेर लैजाने गर्थे । विशेषतः हिन्दू धर्मका देवीदेवता, …
१५ असार २०७८ ०९:०१ 0
परिवर्तन आवश्यक छ । सधैँभरि पुराना प्रचलन र संस्कृतिमा अल्झिएर समाज अगाडि बढ्न सक्दैन । त्यसोभए यो जन्मदेखि मृत्युपर्यन्तका सोह्र संस्कार चाडपर्व, रीतिरिवाज, जात र वर्ण व्यवस्था अनावश्यक हुन् त ? अनावश्यक होइन । सुधार गरेर…
लघुकथा : अनौठो प्रस्ताव
१८ जेष्ठ २०७८ ०९:०१ 0
आज उसको मुड चल्यो । सधैँ एक्लै एक्लै चुस्स लगाउँदा उसलाई दिक्क लागिसकेको थियो । साथीभाइसँग होटल, बियर बारमा गएर `चियर्स´ गर्ने समय र अनुमति थिएन । "धेरैले खाएकै छन् , उनले खाँदा के होला र ? " यति सोच्तै गर्दा दुईवटा गिलास…
१६ असार २०७७ १३:३८ 0
धेरै वर्षसँगै बिते । ऊ सुन्दर थिई मुहारले, मन्त्रमुग्ध पार्दथी व्यवहारले । उषा, सहपाठी । एउटै कक्षामा थिए, तर पनि सूर्य । उसको गुरू, अलि धेरै जानेको अक्षरका अंकहरू । उबेलाको फलामे ढोका, एसएलसी दिए दुबैले — एउटै पलङको टेबुलभरी…